Qisada Mohamed iyo Osman - Telling the Real Story
Mohamed oo ka soo jeeda Hargeisa waxa uu Somalia ka soo baxay 2002, halka Osman oo Muqdisho ka soo jeeda uu soo baxay 2014.
“Dhibaatada ugu badan waxay bilaabataa marka aad Saxaraha soo gasho, haddii aad lacag bixisay iyo haddii kale markasta waa lagugu tacadinayaa. Waxaad dareemaysaa cabsida” ayuu yiri Mohamed.
Labada nin waxaa dhibaatooyin badan ku qabsaday Libya. Mohamed waxa uu ku noolaa wadankaas labo sano halkaasi oo dhowr jeer xabsi la dhigay, isagoo mar lug ka jabay isaga oo isku dayay in uu baxsado. Osman waxaa dhaawacyo badan ka soo gaareen jirdilkii loo geystay.
“Qofku marka uu soo galo baddo ayuu ugu farxad badanyahay,” ayuu yiri Mohamed. “Marka aad doonta saarantahay waxaad Allah ugu mahadcelinaysaa in uu Libya kaa soo saaray.” Ayuu ku daray.
Badda oo ay u xiiso qabeen, ayaa dadka qaarkood ka dhigtay kuwo dabeecad xun. Qaar ayaa bilaabay in ay jeexaan doonta, halka qaar kale ay badda isku tuureen iyaga oo u adkaysan waayay hawada badda, iyo xaalada ay ku suganyihiin ee u dhaxaysa nolol iyo geeri.
“Dadka qaarkood xaaladooda aad ayay u kacday oo waali ayay gaareen, iyagoo badda isku tuuray. Waa in aad dadka ilaalisaa oo aad xaqiijisaa in ay fadhiyaan.” Ayuu yiri Mohamed.
“Qofku marka uu arko badda, oo qoraxdu ku dhacdo. Doontu way ruxanaysaa waxayna ka samaysan tahay bac. Waxaad ku dhawaanaysaa waali.” Ayuu ku daray.
Daawo qisada sida uu safarkoodu ku bilowday
Labada nin waxay go’aansadeen in ay iska dhiibaan Germany maadaama ay ka warhayeen xaalada qaxootiga ee Talyaaniga.
“Waan faraxsanaa, waa dareemi kartaa qof dhibaatooyinkaan soo maray in uu farxayo” ayuu yiri Osman.
Inkastoo reerkoodu uu deyn badan u galay in ay bixiyaan madaxfurasho, waxay ku faraxsanyihiin ay noolyihiin oo waxay rajeynayaan in ay shaqeeyaan oo deynta bixiyaan. Labada nin ayaa ka walwalsan xiliga ay heli doonaan sharciga degenaanshaha si ay u shaqaystaan. Hadda ayay dhigtaan koorso luuqada Jermalka ah, iyagoo ku rajo weyn in ay helaan waxbarasho xaga xirfada ah.
Daawo iyaga oo ka waramaya nolosha Germany